ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001
ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင် ထုတ်ကုန်များ)
ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင်မှိုကို ABS ပစ္စည်းအားဖြင့်ဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ကို ABS ခိုင်ခံ့, Flexible, အနိမျ့မှိုကျုံ့ (နေရာမှာလည်းစာနာထောက်ထားရေး), ဓာတု Resistance, Electroplating များအတွက်သက်ဆိုင်သော, သဘာဝဒီလိုပါပဲ, အနိမျ့ / အလတ်စားကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ် (စက်များ, Panel များ, အနားသတ်ရန်,...
အော်တို Components များအတွက်စိတ်တိုင်းကျအမြင့် Precision Injection ကိုမှို
ပလပ်စတစ်မှို Injector စက်ဒီဇိုင်းထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဒုတိယအခြေခံခြေလှမ်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုလေ့သတ္တုဤအမြိုးအစားထဲကနေထားကြပါတယ်: သြော်သံမဏိ, Prehardened သံမဏိ, လူမီနီယမ်, Beryllium-ကြေးနီအလွိုင်း။ အဆိုပါခိုင်မာသံမဏိပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမှိုများအတွက်သုံးစွဲဖို့စျေးအကြီးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်...
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့ခိုင်မာစေပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို Tools များ
ဆေးထိုးပလပ်စတစ်မှို tool ကို၏အထင်ရှားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာအိမ်ရာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်အတူအပြန်အလှန်မှအဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်လက်ကိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါဟာအစဘက်ထရီနဲ့မော်တာများအတွက် socket အဖြစ်စည်းဝေးပွဲကိုအပြီးအတူတကွ device ကိုလုံခြုံရန်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်သော screw...
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုလက်ဆောင်ဒီဇိုင်း
တစ်ဦးကပူပြေးသမား Injection ကိုမှိုစက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုမယ့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမား၏အားသာချက်ကိုစနစ်တကျဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျှင်, ပလပ်စတစ်တံခါးကိုများ၏အနေအထားမှစက်၏ဆေးထိုးတန်ဆာ nozzle ကနေပိုပြီးအညီအမျှစီးဆင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။...
Hot Runner နှင့်အတူပလတ်စတစ် Precision Injection ကိုမှို Tools များ
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားနည်းပညာကို အသုံးပြု. ဆေးထိုးမှိုပလတ်စတစ်စက်များသံသရာကြိမ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျစိတျအပိုငျးသန်းပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်ကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ, သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။...
ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင်
ပလပ်စတစ် Injection ကိုစက်
Precision ပလတ်စတစ် Injection ကိုကုန်ပစ္စည်း